Momba an'i Abu Dhabi | Law Firms Dubai
Momba an'i Abu Dhabi
I Abou Dhabi dia renivohitry ny Emirà Arabo Mitambatra ary mipetraka eo amin'ny 80% amin'ireo emirates fito an'ny UAE mitambatra. Manodidina ny 67, 340km i Abu Dhabi2, izay ahitana ny tany foana ny ankamaroany, izay ahitana ampahany ao amin'ny Empty Quarter (Rub Al Khali) sy ny gorodona / sabkha. Mahatratra 400km ny moron-tsoratry ny morontsiraky Adu Dhabi.
fiaraha-monina maro samihafa sy samihafa
Ny toekarena haingana indrindra
Nandia fiovana goavana i Abu Dhabi nandritra ny am-polony taona maro. Ny fiovana dia niseho tamin'ny fizarana goavana, nahatonga ny fivoarana sy fampandrosoana ara-toekarena mbola tsy ela izay nahita ny Emirate nitombo tsy ara-potoana ary izao dia metropolis mikoriana. Natao tanteraka izany rehetra izany satria ny mpitondra ao Abu Dhabi dia nandinika ary nanosika ny fampandrosoana nifototra tamin'ny tahiry natobaky ny menaka sy ny entona voajanahary ao amin'ny Emirate.
Ho an'ny fitantanan-draharaha dia mizara faritra telo ny emirate. Ny voalohany dia ahitana ny tanànan'i Abu Dhabi, izay renivohitry ny emirate sy ny fanjakàna federaly. Ny tanànan'ny nosy Abu Dhabi dia manodidina ny 250 metatra avy ao amin'ny tanibe ary manana tanàna hafa maro. Io tanàna io dia mifandray amin'ny tanibe ao amin'ny Maqta, Mussafah, ary ny tetezana lehibe Sheikh Zayed raha ny sasany kosa voaorina.
Tantara fohy momba an'i Abu Dhabi
Ny ampahany sasany amin'i Abu Dhabi dia natsangana tamin'ny taonjato faha-3 taonjato faha-XNUMX, ary ny tantarany tany am-boalohany dia nanaraka ny fomba fanaon'ireo mpiangona sy ny fiompiana ary ny jono eto amin'ny faritra. 'Dhabi,' izay antsoina koa hoe Gazelle Arabo no fototry ny anarana nomena ny renivohitry ny firenena Abu Dhabi (izay midika hoe Rain'ny Gazelle) nataon'ny mpihaza foko Bani Yas tany am-boalohany izay nahita ny nosy voalohany tamin'izy ireo dia teo am-panotanana goavam-be izy ary nahita loharano miboiboika.
Nandritra ny taonjato maro ny fiompiana rameva, fambolena, jono, ary ny fihinana perla no asa lehibe tao anatin'ilay emirate, mandra-pahatongan'ny tapaky ny taonjato faha-20 manodidina ny taona 1958 rehefa hita ny menaka ary nanomboka ny fampandrosoana ny Abu Dhabi maoderina.
Tany am-boalohany dia vondrom-piarahamonina bitika sy etnika i Abu Dhabi tamin'ny voalohany, saingy ankehitriny dia fiarahamonina misy kolontsaina sy karazany samihafa miaraka amin'ny fahatongavan'ireo foko sy teratany hafa eran'izao tontolo izao. Ity fampandrosoana tsy manam-paharoa izay niseho tany amin'ny Telok Persiana dia midika fa i Abu Dhabi dia mazàna amin'ny fomba hafa kokoa raha oharina amin'ireo mpifanila trano aminy, izay ahitana an'i Arabia Saodita.
Fantatra tamin'ny fandeferany i Emiratis. Afaka mahita fiangonana kristiana mifanila amin'ireo tempoly hindoa sy Sikh gurdwaras ianao. Ny habakabaka kosmopolitan dia tsy mitsaha-mitombo ary ankehitriny kosa misy sekoly sy kolontsaina asiana ary tandrefana.
I Abu Dhabi dia manana fananana betsaka hidradradradrana lehibe ao UAE. Tompony 95% ny solika ary 92% ny entona. Raha ny marina dia manodidina ny 9% amin'ireo tahirin-tsolika voaporofo eran-tany ary mihoatra ny 5% amin'ny entona voajanahary izao tontolo izao. Raha ny resaka vokatra anatiny (GDP) sy ny vola miditra per kapita, ny Abu Dhabi's Emirate no manankarena indrindra eto UAE. Maherin'ny $ 1 trily tapitrisa no namatsy vola tao an-tanàna.
Satria iray amin'ny toekarena mivoatra haingana indrindra manerantany, nanjary toerana mafana ho an'ny indostrian'ny famoronana i Abu Dhabi. Noho ny toerana afovoany eo anelanelan'i Azia sy Eropa dia azo idirana ary mifandray amin'ny tanàna lehibe rehetra eto an-tany, ka izany no toerana mety hisian'ny orinasa.
Satria renivohitry ny UAE, ny fanjakana dia manohana mafy ny indostrian'ny orinasa sy ny fampahalalam-baovao eo an-toerana, ny fampiasam-bola be amin'ny fanavaozana ary ny fihazonana tontolo iainana maharitra mamporisika ny mpampiasa vola. Abu Dhabi dia feno fotodrafitrasa mientanentana mahavariana toy ny ivon-toeram-pivoriana manara-penitra, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, kianja, kianja filalaovana golf ary tsy ho ela, ny tranombakoka malaza indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny lehibe noho ny trano fivarotana aina sy ny souqs eo an-toerana dia manao traikefa amin'ny asa fivarotana lehibe. Lovia mahafinaritra eo an-toerana sy iraisam-pirenena no anaovana hotely fisakafoanana manerantany. Ny fitsangatsanganana sy ny bisikileta mamakivaky ny toerana fiakarana mahavariana ao an-tanàna na amoron-dranomasina no fomba fiasa mahafinaritra ho an'ny fahatsiarovan-tena.
Ny Moskoa Sheikh Zayed dia iray amin'ireo moske lehibe indrindra eto an-tany. Ny rafitry ny silamo maoderina maoderina dia naorin'i Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan ho fahatsiarovana ny rainy. Ny voninahitra ny maoske no manana ny karipetra lehibe indrindra eran-tany izay notontosain'ny mpanao asa tanana 1200 tao anatin'ny 2 taona.
Miorina ao amin'ny Nosy Saadiyat ao amin'ny emirate of Abu Dhabi, ny Louvre no tranombakoka ara-javakanto sy sivilizasiôna voalohany amin'ny karazany ao amin'ny United Arab Emirates. Toeram-panintonana mendrika mendrika eo amin'ny toerana iray izay manamafy mafy ny fikajiana sy ny fankasitrahana ny kolontsaina.
Ferrari World no zaridain'i 'Ferrari' voalohany ao na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia manolotra mpitsidika traikefa adrenaline-pumping miaraka amin'ny fombafomba tsy manam-paharoa amin'ny diany. Ankoatra ny fiaran-dalamby nataon'i Ferrari mampientam-po, misy fampisehoana mivantana, lakana mandeha amin'ny herinaratra, ary toetran'ny simulator amin'ny zavakanto.
Tsy lavitra ny Ferrari World ao amin'ny Yas Island no Warner Bros. World Abu Dhabi, tetik'asa 1 miliara dolara izay valan-javaboarin'ny rivotra tanteraka ary misy ny fizarana 29, trano fisakafoanana 7 kintana, trano fisakafoanana ary fampisehoana mampientam-po. olo-malaza fialam-boly malaza Warner Bros. Ny lohahevitra dia mizara ho faritra 6 lohahevitra miroborobo izay an'i Gotham City sy Metropolis (ity endrika mamorona tantara an-tsary DC toa an'i Batman sy Spiderman), Cartoon Junction ary Dynamite Gulch (famakiam-boky feno sary an-tsary Looney sy Hanna Barbera), Bedrock (miorina amin'ny lohahevitra) ao amin'ny Flintstones), ary Warner Bros. Plaza izay mampiseho ny Hollywood taloha.
Amin'ny andro tsirairay, ny tara-pahazavana sy ny lanitra manga dia azo antenaina ao Abu Dhabi. Na izany aza, dia mahatsapa toetrandro mafana sy mando ny tanàna manomboka amin'ny aprily ka hatramin'ny septambra raha toa ny mari-pana avo indrindra eo amin'ny 40 ° C (104 ° F). Ary koa, io no vanimpotoana izay tsy ampoizina ny sandform amin'ny tanàna ary milatsaka ho vitsy metatra ny fahitana.
Saika ny trano rehetra ao an-tanàna no manana rafitra fandraisam-bahiny. Ny vanim-potoana eo anelanelan'ny Oktobra sy Martsa dia somary mangatsiaka kokoa raha oharina. Amin'ny andro vitsivitsy dia hita ny zavona matevina. Ny volana mangatsiaka indrindra amin'ilay volana dia ny volana Janoary sy feb.